Indraim-bava: toy ny bokotr’akanjo e… | NewsMada
Indraim-bava: toy ny bokotr’akanjo e…
Par Taratra sur 16/08/2018
Mihamitombo tsikelikely ny isan’ireo kandidà, nanambara ofisialy ny firotsahan-kofidiny, nametraka ireo antontan-taratasy mifandraika amin’izany, eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). Hatramin’ny datin’ny omaly, 12 izy ireo no nahavita izany. Mbola manana enina andro eo izany ny sisa. Asa, inona ny andrasana ? Manararaotra faramparany mitsapa ny halalin’ny rano amin’ny alalan’ny fitsidiham-paritra sy fitokanan-javatra etsy sy eroa ? Ady fiady avokoa izany. Na koa hoe aleo miandry faramparany mba hisongadinana amin’ny hafa…
Midika izany fa tsy maintsy hisy sy hirosoana ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 7 novambra izao ity. Tsy maintsy hirosoana, na eo aza ny hetsika miendrika fanelingelenana, antsojay ataon’ny hafa. Indrindra ireo mitonona sy mivoy ny hoe “fanarenana ifotony”. Rehefa tsy mahataona olona amin’ny hetsika famoram-bahoaka ataony, mitady izao irika rehetra izao handotoana sy hanaratsiana ny hafa. Hita miharihary fa mpikarama an’ady ny betsaka ao anatiny. Ny vola no mampiteny azy.
Mitaky adidy aman’andraikitra goavana eo amin’ny governemanta mpanatanteraka koa anefa izany. Izay indrindra ny tsy maha tafatombina ny praiminisitra, midina ifotony, mandamina izay tokony halamina, mandrindra izay tokony harindra, manazava izay tokony hazavaina… ahafahana manatanteraka araka ny tokony ho izy izao fifidianana izao. Re ombieny ombieny fa hoe “fifidianana eken’ny rehetra, ao anatin’ny filaminana…” ny tanjona.
Zava-dehibe amin’izany koa ny toe-po amam-panahy tokony hananan’ireo tompon’andraiki-panjakana any rehetra any. Tsy tokony hitanila, hiandany atsy na aroa. Mba ho marina amin’izay atao rehetra e. Efa mazava iny ny baikon’ny praiminisitra amin’ny tsy tokony hanaovan’ny minisitra fampielezan-kevitra. Ilaina ny fampiharana izany ara-bakiteny ka izay tratra mandika izany baiko izany, tokony hodradradradraina atao ho fanta-bahoaka, hoesorina amin’ny toerany miaraka amin’ny vava. “Toy ny bokotr’akanjo ny zavatra atao”, hoy ny fitenenana iray izay, ka “raha mivaralila ny any ambony, mivaralila koa ny aty ambany”.